တပ်အာဏာ လျှော့ချဖို့ မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး၊ ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပါ အလွတ်မပေးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုဗစ်၁၉ အပါအဝင် တစ်ပတ်အတွင်း သတင်းကောက်နုတ်ချက်
တပ်အာဏာ လျှော့ချဖို့ မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံပ...
14 มี.ค. 2563 - 16:39 น.
ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ် (မတ် ၉ ရက်ကနေ ၁၄ အတွင်း) ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အထဲက ထူးခြားတဲ့သတင်းကတော့ လနဲ့ချီဖြစ်နေတဲ့ ကိုဗစ်၁၉ ဗိုင်းရပ်စ် ကို ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ (Pandemic) လို့ သတ်မှတ်လိုက်တာကြောင့် မြန်မာပြည်မှာ စားသောက်ကုန်တွေ လုယက်ဝယ်ယူမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ တပ်မတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလျှော့ချဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ချက်တွေ မအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။
(၁) တပ်အာဏာလျှော့ချရေး မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး
ပထမဆုံးမဲစခွဲတဲ့နေ့မှာပဲ တပ်မတော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို လျှော့ချတဲ့ပုဒ်မတွေ ပြင်ဆင်ဖို့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားသူဆိုတဲ့အင်အာစုတွေနဲ့ တပ်မတော် သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တချို့ အောင် ပွဲခံတဲ့အသွင်ဆောင်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ လူမှု ကွန်ရက်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလိုအခြေအနေတွေက တပ်မတော်နဲ့ ရင်ကြားစေ့ရေးကြိုးပမ်းနေတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီအစိုးရအတွက် ဘယ်လို အသွင်ဆောင်နေပါသလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အန်အ်ယ်ဒီအမတ် ကိုနေဘုန်းလတ်က အခုလိုပြောပါတယ်။
"ခုကတော့ ဒါ ပြည်သူတွေလည်း အားလုံး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိမြင်သွားတာပေါ့ဗျာ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ ခက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရယ်၊ နောက်ပြီးတော့ တပ်မတော်ရဲ့သဘောထားကလည်း ဘာမဟုတ်တဲ့ တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပဲ ပေးပြင်ပြီး ကျန်တာတွေအကုန်လုံး ဘာမှမပြင်နဲ့ ဆိုတဲ့သဘောထား အတိုင်းပဲရှိနေတယ်ဆိုတာတော့ ပြည်သူတွေ ထင်ထင်ရှားရှား သိသွားတာပေါ့။"
"ဖွဲ့စည်းပုံရေးထားတာကိုက တပ်မတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို အကြီးကြီးထည့်ထားတာပေါ့။ တပ်မတော်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအရ အပြောင်းအလဲတစ်ခုတော့ လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကို ကျွန်တော်တို့က မျှော်လင့်တာပေါ့။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးဆိုလည်း အထိုက်အလျောက်အလျှော့အတင်းပေါ့နော်။ တချို့အချက်တွေဆိုရင် ပြင်ခွင့်ရမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့က မျှော်လင့်ခဲ့ဖူးတာပေါ့နော်။ ရှေ့ဆက်သွားမယ့် ခရီးတွေအတွက်တော့ သိပ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့။ တပ် မတော်က အရေးလည်းပါတယ်လေ။ ခုဟာက သူတို့က မပူးပေါင်းချင်တဲ့သဘောဖြစ်နေတာ့ အရာရာက ကြန့်ကြာနေဦးမယ်ထင်တယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ Dialogue (ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု) တွေကနေလာရမှာပေါ့" လို့ ဦးနေဘုန်းလတ်က ပြောပါတယ်။
တပ်မတော်ဘက်က ဒီလို လက်မခံနိုင်တဲ့အခြေအနေ ဖြစ်နေရအောင် အန်အယ်လ်ဒီကပြင်ဆင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာတွေက ဒီအချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
လွှတ်တော်အသီးသီးမှာ ပါနေတဲ့ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို လွှတ်တော် သက်တမ်းအလိုက် တဖြည်းဖြည်းလျှော့ချဖို့ ပြင်ခဲ့တာပါ။ နောက်ဆုံး တပ်မတော်သားတွေ လွှတ်တော် ထဲမှာ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိပဲ ထားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့ဆိုရင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးရဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်ထောက်ခံဖို့ လိုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ရွေးကောက်ခံအမတ်တွေရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံကျော် လို့ပြင်ထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးမှာ ရွေးကောက်ခံအမတ်တွေပဲ မဲပေးခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်တွေက တခြားကိစ္စတွေကလွဲလို့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးမှာ မဲပေးခွင့်မရှိတဲ့သဘောပါ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟာ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အားလုံးရဲ့ အကြီးအကဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ပုဒ်မ ၂၀ (ဂ) ကို ပယ်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တပ်ချုပ်က ခန့်အပ်ခွင့်ရှိတဲ့ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် နယ်လုံ ဝန်ကြီး တွေနဲ့ နယ်စပ်ရေးရာ ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးတွေ ခန့်အပ်ခွင့် ဆိုတဲ့ ပုဒ်မ ၁၇ (ခ) ကို ပယ်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရ၊ တပ်နဲ့ လွှတ်တော်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဖွဲ့ထားတဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေး ကောင်စီ (ကာလုံ) ကို အရပ်သားအများစုနဲ့ ဖွဲ့ဖို့ အန်အယ်လ်ဒီက ပြင်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ ကာလုံအဖွဲ့ဝင်တွေက သမ္မတ၊ ဒုသမ္မတ ၂ ဦး၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ နှစ်ဦး၊ တပ်ချုပ်၊ ဒုတပ်ချုပ်၊ နိုင်ငံခြားရေး၊ နယ်စပ်၊ ကာကွယ်ရေးနဲ့ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးတို့နဲ့ စုစုပေါင်း ၁၁ ဦးပါ။
အဲဒီ ၁၁ ဦးမှာ တပ်မတော်က ခန့်အပ်တဲ့ ဒုသမ္မတ ၁ ဦးအပါအဝင်နဲ့ဆို တပ်ဘက်က မဲက ၆ မဲဖြစ်နေပြီး ဒါက ကောင်စီမှာ တစ်ခုခုကို ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင် တပ်ရဲ့ မဲတွေက အသာရနေတဲ့ အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။
အန်အယ်လ်ဒီက ပြင်ဆင်တာကတော့ ကောင်စီက နယစပ်ဝန်ကြီးနေရာမှာ လွှတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌ ၂ ဦးကို အစား ထိုးခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် ကာလုံအဖွဲ့ ဝင် ၁၂ ဦးရှိလာမှာဖြစ်ပြီး မဲခွဲဆုံးဖြတ် ဖို့လိုလာရင် အရပ်ဘက် မဲ က ၇မဲနဲ့ ပိုများလာမယ့်သေဘာဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်မှာ အရေးပေါ်အခြေအနေကြုံလာရင် တပ်မတော်က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ နိုင်ငံ တော်အာဏာကို ရယူသုံးစွဲခွင့်ရှိတယ်လို့ ပြဌာန်းထား တာကို အန်အယ်လ်ဒီက ပယ်ဖျက်ထားပါတယ်။
အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ တပ်ချုပ်နဲ့ ကာလုံနဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို လျှော့ချပြီး သမ္မတနဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို တိုးမြှင့်ထားပါတယ်။ ဒါက အရေးပေါ်အခြေအနေကြုံလာရင် သမ္မတက ဦးဆောင်ဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
တပ်မတော်ရဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်ခွင့်ကို လျှော့ချထားတဲ့ နောက်ထပ် ပုဒ်မ တစ်ခုက ၆ (စ) ပါ။ ဒီပုဒ်မမှာ ပြဌာန်းထားတာက နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှာ တပ်မတော်ပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေး အစဉ် တစ်စိုက် ဦးတည်သည် လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို အစဉ်တစိုက်နေရာမှာ ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့အညီသာ ပါဝင်ရန် လို့ ပြင်ခဲ့ပါတယ်။
အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေဟာ မဲခွဲရာမှာ ထောက်ခံမဲ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်မရတဲ့အတွက် မူလအတိုင်းပဲ ဆက်ရှိနေမှာပါ။
ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးမှာ တပ်မတော်ရဲ့ဦးဆောင်မှု ဆက်ရှိနေမယ့်သဘောဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်ရဲ့ သဘောထား ဘယ်လိုရှိနိုင်လဲဆိုတာကို ISP Myanmar က ပြင်ပဆက်သွယ်ရေးဒါရိုက်တာ ဦးအောင်သူငြိမ်းက ခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။
"အရင်က တပ်မတော်ဘက်က ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ပြောဖူးတာရှိတယ်။ တပ်ဘက်က အနေနဲ့ ဥပဒေကြမ်းတွေ ဘာတွေတင်တာမျိုး လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့က check and balance ဒီလို အထိန်းအဖြေသဘောမျိုးပဲ ဒီလွှတ်တော်ထဲ ဝင်ရပ်တည်တာလို့ပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု ဒီတလောမှာ တွေ့လာရတာက တပ်မတော်ကိုယ်တိုင် ဥပဒေမူကြမ်းတွေ တင်လာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့လာရတယ်။ ဒါကလည်း ကျွန်တော်ထင်တယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အင်အားစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခု မယုံကြည် မှုပိုများလာလို့ ဒီလိုဖြစ်လာတယ်လို့ ထင်တယ်။ တပ်ဘက်ကတော့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ်မှာ တုံ့ပြန်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ တပ်မတော်က ခံယူတာက တပ်မတော်သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်လို့ ပါတာကိုး။ တစ်ဖက်ကလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက သူတို့ကို အထူးအခွင့်အရေးတွေလည်း အများကြီးပေးထားတာကိုး" လို့ ဦးအောင်သူငြိမ်း က ပြောပါတယ်။
ကိုရိုနာအရေး၊ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ အိန္ဒိယခရီးစဉ်၊ စစ်ရေးပြအခမ်းအနားအရွှေ့နဲ့ လွှတ်တော်ထဲက စကားလုံးတိုက်ပွဲ
ကူးစက်သူသိန်းချီနေတဲ့ ကိုဗစ်၁၉၊ ပျက်ကျတဲ့တပ်မတော်ရဟတ်ယာဉ်၊ ၁၄၀၀ အောက်ထိ ကျသွားတဲ့ဒေါ်လာဈေး
တကယ်တော့ တပ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း အလိုအလျောက် နေရာယူထားတဲ့ လွှတ်တော်မှာ တပ်ရဲ့ ထောက်ခံမဲ မရဘဲ ၂၀၀၈ အခြခံဥပေဒ ပြင်ဖို့က သိပ်ကို ခဲယဉ်းလွန်းလှပါတယ်။ တပ်ဟာ လွှတ်တော်ထဲမှာ အန်အယ်လ်ဒီပြီးရင် ဒုတိယ အင်အားအများဆုံးလည်းဖြစ်နေတာပါ။
ဒါကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအကြပ်အတည်းကိုဘယ်လိုကျော်လွှားနိုင်မလဲဆိုတာ မြန်မာ့အရေးလေ့လာသူ ဦးသန်းစိုးနိုင်က ခုလိုအကြံပြုပါတယ်။
"အန်အယ်လ်ဒီအနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဘာတွေပြင်ဆင်နေလဲဆိုတာကို ပြည်သူလူထုရော နိုင်ငံရေးသမားတွေရော သိသွားတာပေါ့။ တပ်မတော် ရဲ့ ကြံ့ဖွံ့ရဲ့ သဘောထားက ဘာလဲဆိုတာလည်း ပေါ်လွင်သွားတာပေါ့။ တပ်မတော်ရဲ့ အခြေခံသဘောတရားက ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးဆိုတာ တပ်မတော်ရဲ့အခန်းကို ကာကွယ်ပေးဖို့လုပ်ထားတဲ့ဥပဒေပုဒ်မတွေမှန်သမျှ အထိမခံပါဘူး။ ဒါကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆို NCA လမ်းကြောင်းပေါ့ဗျာ။ NCA မှာကျတော့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ စသဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံက ပါဝင်ဆွေးနွေး တင်ပြလာတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဆွေးနွေးဖြေရှင်းတယ်။ ဆွေးနွေးဖြေရှင်းတယ်ဆိုရာမှာလည်း UPDJC ကနေပြီးတော့ အဲဒီကိစ္စကို တပ်မတော်အပါအဝင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖြေရှင်းတဲ့အတွက် အဲဒီနည်းလမ်းက ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။"
(၂) ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပါ အလွတ်မပေးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုဗစ်၁၉
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ အဖြစ် မတ် ၁၁ ရက်မှာ သတ်မှတ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဒီမတိုင်ခင်တည်းက နိုင်ငံပေါင်း တစ်ရာကျော်မှာ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရောက်နေပါပြီ။ နေရာစုံဒေသစုံမှာ လူကနေ လူကို လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ အလွယ်တကူ ကူးစက်ပျံ့နှံ့တာမို့ ခုလို ကပ်ရောဂါလို့ သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။
မတ်လ ၁၄ ရက်အထိ လူပေါင်း တစ်သိန်းသုံးသောင်းကျော် ကူးစက်ပြီး လူ ငါးထောင်ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပါပြီ။
ဗိုင်းရပ်စ် ဗဟိုချက်မ တရုတ်မှာ ကူးစက်မှုနှုန်းကျဆင်းပေမယ့် အခုတော့ ဥရောပက ဗိုင်းရပ်စ်ဗဟိုချက်မ ဖြစ်လာတယ်လို့ WHO ကပြောလာပါတယ်။
ဒီဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရတဲ့ထဲမှာ ဟောလိဝုဒ်မင်းသားကြီး တွမ်ဟန့်တို့ဇနီးမောင်နှံ၊ ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ဇနီး၊ အာဆင်နယ်ဘောလုံးအသင်း နည်းပြချုပ် အတီတာ၊ ချယ်လ်ဆီးက လူငယ်ကစားသမား အိုဒိုင်း၊ ဂျူဗင်တပ်အသင်းက ကစားသမား ဒိုင်းဘာလားတို့ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
မင်းသားကြီး တွမ်ဟန့်စ်နဲ့ ဇနီး ရီတာတို့လည်း ကူးစက်ခံထားရပါတယ်။
အီရန်က စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦး ဒီဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ သေဆုံးခဲ့ရသလို ဘရားဇီးသမ္မတရုံးက အဆင့်မြင့်အရာရှိတစ်ဦးလည်း ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရပါတယ်။
ကပ်ရောဂါအဖြစ် ကြေညာပြီးတဲ့နောက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကောလဟာလ သတင်းတုတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး အစိုးရရဲ့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှုအားနည်းတာကြောင့် လူတွေ ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ စားသောက်ကုန်နဲ့ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေ အလုအယက်ဝယ်ယူတာတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သမ္မတရုံးက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီး တိုင်းပြည်ထဲမှာ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံကြောင်းနဲ့ ကိုဗစ်အကြောင်းပြု ကုန်ဈေးနှုန်းတက်အောင်လုပ်သူတွေကို အရေးယူမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံအတော်များများမှာ ဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့ လူစုလူဝေးလုပ်တာတွေ တားမြစ်ခဲ့ပြီး မြန်မာမှာလည်း သင်္ကြန်ပွဲတော်အပါအဝင် လူစုလူဝေးနဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်တွေအခမ်းအနားတွေကို ဧပြီလကုန်ထိ ရပ်ဆိုင်းထားပါတယ်။ လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလို ရပ်ဆိုင်းကာလကို ထပ်တိုးဖို့ရှိနေပါတယ်။
อัลบั้มภาพ တပ်အာဏာ လျှော့ချဖို့ မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး၊ ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပါ အလွတ်မပေးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုဗစ်၁၉ အပါအဝင် တစ်ပတ်အတွင်း သတင်းကောက်နုတ်ချက်